Horumarka Somaliland Ay Gaadhay Waxyaalaha Laga Xusi Karo Waxa Ka Mida Isgaadhsiinta Casriga Ah Ee Internate Ka (Fiber Optic) Ee Shirkada Somcable | Marsa News
Horumarka Somaliland Ay Gaadhay Waxyaalaha Laga Xusi Karo Waxa Ka Mida Isgaadhsiinta Casriga Ah Ee Internate Ka (Fiber Optic) Ee Shirkada Somcable
June 3, 2018 - Written by editor marsan
Haragisa:(Marsanews) Somaliland oo haatan jirta rubuc qarni in ka badan waxa ay samaysay horumar dhinacyo badan leh oo ka yimid badiba dhinacyada shacbiga gaar ahaan ganacsatada dalka.
Taniyo markii somaliland dib ula soo noqotay madax banaanideedii waxa ay ku dhaqaaqday sidii ay dalkeeda dib ugu dhisi lahayd si uu ula jaanqaado dadyawga horumaray iyo guud ahaan ba beesha caalamka, iyadoo ka soo bilawday horumarkaa meel aad u hoosaysa haatana maraysa meel taa hore lidigeeda ah oo aad u saraysa.
Somaliland oo haatan ay shirkada isgaadhsiinta casriga ah ee Somcable ka hirgalisay xadhiga internateka xawaarihiisu sareeyo ee dhulka hoostiisa mara loona yaqaano (fiber optic) Ayaa kaw ka noqonaya horumarka somaliland masalka loogu soo qaadan karo halka ay maanta marayso.
Isgaadhsiintan casriga ah ee shirkada Somcable ay dalka ka hirgalisay waxa ay dhamaan qaranka somaliland u suurta galisay qodobo dhawra oo intuba ahaa halbawlaha horumarka baahiyihii aasaasiga ahaa kuwo daboolay qodobadaas oo kala ah:
1- Somaliland oo si buuxda uga hoos baxday Isgaadhsiin ay u marto caalamka intiisa kale Muqdisho.
2-Fududeynta dhamaanba Isgaadhsiinta guud ee dalka.
3-Mashruucan isgaadhsiinta casriga ah ee shirkada Somcable waxa uu u soo kordhiyay hay’adaha dawliga ah ee qaabilsan arrimaha amniga, difaaca, Bilayska iyo ilaalinta xuduudaha badda iyo barrigaba in ay helaan Isgaadhsiin ku filan oo ay iyagu si toos ah u maamushaan.
Sidoo kale, hay’adaha caalamiga ah ee dalka degan, Jaamacadaha, Iskuullada, Cusbitaalada iyo dhakhaatiirta, ayaa dhamaantood si fudud uga faaidaystay hirgalinta ama helista isgaadhsiintan castriga ah, tiyo uu u dhib yareyay, fursadna u siiyay inay Caalamka kala xidhiidhaan dhinacyada Waxbarashada, Caafimaadka, Cilmi baadhista IWM.
Hadaba marka aad eegto ahmiyada qodobadaasi waxa aad garan karaysa dhamaan baahiyaha ay dabooshay miisaanka ay leeyihiin iyo qaran ahaan sida ay uga qayb qaadanayso badbaadada sugida xogaha iyo waliba faaiidooyinka kala duwan ee bulshadu ay ka heshay, haday tahay dhanka shaqo abuurka oo dhalinyaro aqoon yahan iyo muruqmaalba isugu jiraa ay ka heleen shaqooyin iyadoo wakhtiga lagu jiraana yahay waxkhti dalku uu aad ugu baahi qabo shaqo abuur baaxad leh.
Dabcan shirkada isgaadhsiinta Somcable ee khadka internateka xawaarihiisu sareeyo ee (Fiber optic) dalka ka hirgalisay waxa ay soo kordhisay waa mid ku suntan taariikhda dalka iyadoo ay sabab u tahay wadaniyada iyo waliba lexejeclada ay qarankeeda ka qabto islamarkaana ay bulshadeeda gaadhsiisay bahwaynta ehelka cilmiga ah ee daafaha dunida ku kala nool ee casrigan aqoontooda u saraysaana tahay tan Somcable somaliland ka samaysay oo kale.
Wretting by Cheif Editor
C/risaaq Sheekh Maxamed
Email: Abdirizake74@gmail.com Ama Tell: 0634480472